ကျော်ခ| February 1, 2013 | Hits:32,238
| | ကချင်ပြည်နယ် ကျယ်ယန်ကျောင်း စာသင်ခန်းနားမှာ ဗုံးခိုကျင်းလည်း တူးထားရတယ် (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုKNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာချုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဦးအောင်မင်းနှင့် KIA တွေ့ဆုံပွဲ စစ်တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မတက်ဦးအောင်မင်းနှင့် KIA မြစ်ကြီးနားတွင် တွေ့မည်နောက်ပြန် ဆုတ်မှာစိုးလို့ မဝေဖန်ဘဲ ငြိမ်ခံနေသင့်သလား
AunG February 1, 2013 - 8:39 pm i can’t believe to burma army generals/ex-generals, in fact, they even talks Useless and Lie Words…only
Reply ပါကြီးဖိုး February 1, 2013 - 10:15 pm “ကချင်ပြည်က ပြည်သူတွေ အအေးဒဏ်နှင့် စစ်ပြေးနေကြရတာ ကြားတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်း အစုံအလင် ပူးပေါင်း မေတ္တာထားပြီး အဖြေရှာကာ အကောင်းဆုံးနဲ့ လမ်းသစ်တခု ဖောက်ကြပါ၊ ဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါခင်ဗျား”
Reply Linyone February 2, 2013 - 12:56 am The Union of Burma has suffered needlessly too much. The right medication is needed to cure the disease. To cure our Union from her suffering, the right medication is political dialogue on the table.
Reply zaw February 2, 2013 - 8:53 am PEACE IS GOOD. PLEASE LOOK POPULATION. IF STATES RESPECT TO FEDERAL GOVERNMENT, FEDERAL GOVERNMENT WILL RESPECT TO STATES.
Reply နတ်ဆိုး (၁၃ ) February 3, 2013 - 5:35 pm သိပ်ကောင်းတယ် ဖိတ်ခေါ်မှုပါ၊ ဥပမာ ။။သားသမီးဆိုးနေလျှင် ဘယ်မိဘက မှပစ်မထားသလိုပေါ့ ၊ တပ်မတော်ဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက မိဘ များသဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။